I'm Good Explained — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Akati Ini haasi mhosva kunyange ndichiri haana akanga kwangu zuva dare /
Iyi ndiyo nzvimbo vatendi vakawanda isu. Tinoziva kuti marwadzo, miedzo, uye zvichida kunyange rufu ava pedyo. kutya kwedu uchingotizevezera munzeve dzedu uye vanotiudza kuti muedzo uyu ndiwo mugumo wenyika- kuti zviri pamusoro pedu. Asi izvozvo handizvo akatiudza Ishe. akativimbisa Ishe kuti isu akataura hazvizogamuchirwi mhosva pamberi pake nokuda kwaKristu (Romans 4:5). Uye saka isu havazombotsakatiswi (John 3:16). Rufu hazvina magumo yechiKristu; ndiwo mavambo itsva, munokubwinya chokwadi.
Ndava vakaravira uye ndakaona naYe, kunyange zvazvo zviri kwaingova kufanoravidzwa /
Nokuti Jesu akafa uye akandiisa Mwari (1 Peter 3:18), Ndava vakaravira uye ndaona kuti zvakanaka. Asi kunaka kuti ndava aravira ndiyo chete kufanoravidzwa. Rimwe zuva ini ndichava Ishe wangu, uye nekusangana kunaka kwake zvakazara.
Handizivi zvavari kunzwa, Handizivi vachifunga /
BRO mweya wangu asingakundiki kufanana Mario paakanga achibwaira /
In mutsetse uyu, Ndakanga ndine zvishoma mafaro chete Mario bhuku. Asi ndakanga kungwarira kuti ndiri ramba kuonekwa. Ini zvinogona vakuvadzwa, Ndinogona mwoyo, Ndinogona kunyange kuurayiwa. Asi mweya wangu zvisingadzimiki kuurayiwa kana kuparadzwa, nekuti ndine rakachengeteka muna Jesu. Apo Super Mario unozviona achibwaira nyeredzi chaiyo, zvisinei vavengi akasangana, havagoni kumukuvadza. Ndizvo zvinogona kutaurwawo mweya kudzikinurwa. Unogona uchatumbura muviri wangu kwakabvarurwa-bvarurwa, asi mweya wangu icharamba yakabatana. Uye Mwari agadzirira guta kwatiri (Hebrews 11:16).
Vanondiona nemufaro, akafanana handizivi chii iye doro /
Cup ruzere kurarama mvura BRO, Ini sveta uye umutende, yessir /
Vanhu angandiona vachirwira mufaro mukati kutongwa uye kunyonganiswa. "Anogona sei kunyemwerera munguva seizvi?” Asi handisi vanopenga kana akadhakwa, Ndiri rakachengeteka. Ini ndakakunda sipped kubva mutsime husingaperi, uye mweya wangu unoguta (John 4:13-14).
Ndirege kuhwina grammy, kana kuwana mumwe akatisiyira /
Asi Ndichakuwanirai mibayiro kubva kuna Ishe wangu, hachisi chinhu nani /
Ini varege kuronga zvakare, Ndirege akatengesa milli /
Asi ini yatengwa naMambo wangu, Iye nokusingaperi neni /
Ndakanyora chikamu ichi nokuti, mumaziso enyika kureba kubudirira nokuti mifananidzo iri kutengesa boka zvinyorwa uye kuwana boka pamutemo. Asi kunyange kana handina kuwana imwe mubairo kana nyika mumwe pachati, Ndonzwa mushe. Ndirege mibayiro kubva nyika, asi Ndichakuwanirai mibayiro kubva Jesu. zvinyorwa zvangu zvirege waakatenga munhu, asi ndakatoiverenga yatengwa uye vakadzikinurwa kuburikidza naJesu.
Saka chii ivo kutaura Kumbonetswa? No havagoni ini ndichigogodza pasi /
Yessir ndava kunzwa marwadzo, asi Jesu akamuka ini zvino /
Zvakare, Handidi vafarire kufunga ndinoreva vaKristu havana kutarisana nomuedzo, kana kunyange kuti hatidi kunzwa kurema nemiedzo ivavo. Tiri Kazhinji atarisana aizotambudzwa, asi Jesu vanawo.
Ndicho chikonzero ndiri kuita ruzha, ndosaka ndiri vachimhanya nesimba /
Ndicho chikonzero pandinoenda gorira, mate pavo Tsoko mbariro /
All chokwadi I ataurwa pamusoro apa chinokurudzira ini. Ndokusaka wandinokuparidzirai akanaka uye kudzima Albums. Ndokusaka ndinoda mate mbariro kuti kubata pfungwa dzevanhu. Ndinoda kuratidza kuti anokonzera zvinhu zvose zvakanaka.
Partner munoziva Ndiri zvakanaka kuenda /
Pressure anosika nengoda uye moto anochenesa ndarama /
Hapana ino iri inogutsa mweya wangu /
Ndiri kurarama mangwana, nhasi kudzora, Fa Sho, Ndonzwa mushe/
Tora mari yangu yose, Ndonzwa mushe/
Hoyo kurwadziwa, Ndonzwa mushe/
Hongu vanogona kundiuraya, Ndonzwa mushe/
Kufa ifuma, Ndonzwa mushe/
I haasi kuti isu havambonyari marwadzo /
Ndiri kungoti haukwanise kutora vatishorere mutambo, chikonzero homie isu zvakanaka /
Lyrics ava vakanaka kuzviremekedza rinotsanangura. Pane zviri rwiyo urwu "zvakanaka” hazvirevi Ndiri akakwana kana wakarurama ndoga. Rutsigiro tinoziva kuti hazvina chokwadi chipi wedu (Romans 3:11-12). "Ndonzwa mushe” ndeimwe nzira achiti, "Ndiri inotonhorera” kana "Zvose Horaiti.” Nekuti tiri muna Kristu, unogona kutora zvose kubva kwatiri, asi isu tiri zvakanaka nokuti tiri Wakasungirirwa muna Kristu.
Ndinoziva kuti I'ma vachitambura, kuti unenge chete kundiita Yakaomarara /
Rufu inongova suo kundiendesa mudiwa wangu akatendeka /
Ndima kufanana Mabasa 14:22 uye 2 Timothy 3:12 ini kuyeuchidza kuti sezvo muKristu Ini muchanyara. Uye ndima kufanana James 1:4-8 uye VaRoma 8:28 kundiyeuchidza kuti Mwari anoshandisa kutambura kuti ndinyanye akafanana Kristu. Miedzo iyi vangatova kutora upenyu hwangu, asi vatendi havafaniri kutya rufu. Jesu ndiye akatanga rumborera kubva murufu, uye zviri nani zvikuru kwatiri kuti tive naJesu pane kuva pano.
The Anoda mweya wangu neni, unogona zunzai mukoma /
Asi haumbofi ini kugogodza pasi kana kundibata pasi, kuuya kutinhira /
Regai madutu vauye kwatiri kutambudza uye akatirwadzisa /
Havagoni kutora Ishe wedu kubva kwatiri BRO Akamuka kwatiri mutongo /
Not mhosva, Iye nesu uye iye anoramba aripo /
Usamborega ini anosiya kunyange zvinondipa pachikuva pamberi /
Izvi kokupedzisira nhanhatu nembariro zvose zvinopupurira imwe yakanyatsoti chokwadi, Ishe aneni. Uye pasinei nokuti chii chaitika., Acharamba neni. Hapana zvachose kuti chinogona akandiparadzanisa rudo rwaMwari muna Kristu! (Romans 8:38-39)
Chinonyanya kukosha chinhu pamusoro pangu ndechokuti ndiri vakabatana naJesu. Ndiwo usingachengeteki yatorwa kwandiri. Chero anouya nzira dzangu, Iye rakandidzidzisa kutaura, "Hazvina zvakanaka mweya wangu.”
M.J.S. • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:41 ndiri • pindura
simba, simba mumhanzi mukoma. Ini vhidhiyo nokuda “Ndonzwa mushe,” uye vakasiya ndibvunze kuti nei wakasarudza mamiriro ezvinhu musikana yevaMuslim huri mumuviri kushungurudzwa yokuverenga Bhaibheri?
VaMuslim vanotenda TOSE nevaprofita vaMwari uye Magwaro vakauyisa vanhu. Pane anobata kupfuura kugutsikana kuti vaMuslim havatendi muna Jesu. Musiyano anokosha ndeyokuti VaMuslim Jesu Somuprofita, uye Islam hapana muprofita anoonekwa sezvo zvikuru kupfuura imwe.
My chinangwa nokuti this post haisi nharo chitendero asi kubvisa kusanzwisisa kugumisa kupararira mashoko enhema. Handizivi kuti chii chaizvo rinoreva iwe raireva kuratidza pamwe panzvimbo(ndosaka ndiri kubvunza), asi pachake izvozvo inokanganisa vaMuslim kudavira hurongwa pamusoro Magwaro.
Woleogundele • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:41 ndiri • pindura
Loyd • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:41 ndiri • pindura
unogona ndapota itai izvi Ziva Me. Ndinoda chaizvo kuziva kwako pfungwa rikurumidze pamusoro shoko yakasarurwa. Zvakananga chikamu apo iwe Rap kuti “Ndava vakarambana dzimwe mhuri, Ndiri anozivikanwa kuti kuparara.” Ndine wangu zvinokubatai pachake pandima iyi asi ndinoda kuziva chaizvoizvo chii imi zvaireva. Ndinonzwisisa kana usina nguva kuita izvi uye regai ziya naro. Ramba richisvika vanhu Trip. Ita Ya Thắng! Mwari komborera!
Leslie • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:42 ndiri • pindura
My kekutanga Posting :) Ndiri saka mufaro iwe Hamubvumirwi rwiyo urwu pamwe Rugwaro nezve uye pfungwa muitiro shure mashoko ako. Mwanakomana wangu ane makore 9 okuberekwa uye ini vose vanoda mimhanzi yako, uye ndiri kutora mangwana kubvisa kupedza imwe unhu nguva naye tisati tatanga Easter vhiki racho. Handikwanisi kumirira kugara divi-ne-divi naye kuenda kuburikidza mashoko aya uye tarisa kumusoro Gwaro pamwe nomumwe. Iye achava kufara! Mazvita Trip, rudo zvikuru kubva Orlando, FL!!
Wayland Wilson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:42 ndiri • pindura
Farai pano wenyu DC nharaunda. Ini dzimwe nguva zvakabatira Chinatown Hope kuti Mhanyai mauri nguva. runyararo.
Brandon Caron • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:43 ndiri • pindura
Kufara kuziva kuti une Blog. Vachafanira kutanga vachiongorora kubva nguva nenguva. Ndaiva saziva.
Aaron Fillmore • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:43 ndiri • pindura
Ndinofarira feelin Mweya kutamira ari yokurovedza muviri kuteerera ichi…vanhu vanobvunza zvandiri kuteerera zvakare-ndinoti in #imgood
migisha Boyd • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:43 ndiri • pindura
tambudza akwongele! _luganda nokuti Mwari Muropafadzwe”
Shola Rock • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:43 ndiri • pindura
Ramba rapping nokuti Kristu. Ndinoda zvose zvenyu Albums. All vari Kristu hwakavakirwa uye Biblical. Inzwi venyuwo inotonhora uye anorova uri kushandisa munotyisa; Mwari vakuropafadzei BRO!!!
Kananelomojaki • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:43 ndiri • pindura
zvakanaka chete GNU
Henock Teshome • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:44 ndiri • pindura
zvinhu zvakanaka uye Ndinokutendai tsananguro.
tina • Nyamavhuvhu 21, 2013 pa 11:18 ndiri • pindura
Mwanakomana wangu (9) uye ini luv rwiyo urwu! unotyisa uye simba zvinorehwa akadaro shure kwayo :)